Hebri Nkyerɛwde Ketewaa no Ma Yenya Awerɛhyem Kɛse—Yod
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Moore Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Tetragrammaton no ne Onyankopɔn din kronkron, Yehowa, wɔ Hebri nkyerɛwee mu; wɔkyerɛw fi nifa kɔ benkum
Yegye di paa sɛ Onyankopɔn bɔhyɛ nyinaa bɛbam anaa? Ná Yesu gye di saa, na ɔkyerɛkyerɛɛ nkurɔfo nso ma wogye dii. Yɛnhwɛ ntotoho bi a ɔyɛe wɔ ne Bepɔw so Asɛnka no mu. Ɛwɔ Mateo 5:18, na ɛhɔ ka sɛ: “Nokwarem mise mo sɛ ɛbɛyɛ mmerɛw sɛ ɔsoro ne asase betwam akɔ ntɛm koraa sen sɛ nkyerɛwde no mu ketewaa biako anaa nkyerɛwde no bi ho nsensanee biako befi Mmara no mu atwam a ade nyinaa renyɛ hɔ.”
Hebri nkyerɛwde no, emu ketewa paa ne י (yod). Ɛno ne nkyerɛwde a edi kan wɔ Tetragrammaton no mu. Tetragrammaton no ne Onyankopɔn din kronkron, Yehowa. * Ná akyerɛwfo ne Farisifo no bu asɛmfua ne nkyerɛwde biara a ɛwɔ Onyankopɔn Mmara mu sɛ ɛho hia. “Nkyerɛwde no bi ho nsensanee” nso, na wɔntoto no ase koraa.
Nea na Yesu reka ne sɛ, ɛbɛyɛ mmerɛw sɛ ɔsoro ne asase betwam akɔ sen sɛ Mmara no mu asɛm ketekete paa mpo betwam a ɛremma mu. Nanso Bible ma yehu sɛ, ɔsoro ne asase a ɛwɔ hɔ yi rentwam da. (Dwom 78:69) Enti wei ma yehu sɛ Mmara no mu asɛm ketekete paa mpo bɛbam ɔkwan biara so. Yesu asɛm yi ka koma paa.
Enti nneɛma nketenkete mpo ho hia Yehowa Nyankopɔn saa? Aane ehia no paa. Susuw asɛm yi ho hwɛ: Onyankopɔn ka kyerɛɛ tete Israelfo no sɛ ɛnsɛ sɛ wobu Twam guan no dompe biara mu. (Exodus 12:46) Ebia yɛbɛfa no sɛ ɛyɛ ade ketewa bi. Nea enti a na ɛnsɛ sɛ Israelfo bu dompe biara mu no, na wɔte ase anaa? Ebia na wɔnte ase. Nanso Yehowa Nyankopɔn deɛ, na onim sɛ saa asɛm no yɛ nkɔmhyɛ. Nea ɛkyerɛ ne sɛ, sɛ wɔbɔ Mesia no asɛndua mu a na wɔremmu ne dompe biara mu.​—Dwom 34:20; Yohane 19:31-33, 36.
Dɛn na yesua fi Yesu asɛm yi mu? Yɛn nso, yebetumi anya ahotoso koraa sɛ Yehowa Nyankopɔn bɔhyɛ nyinaa bɛbam. Asɛm ketewa paa a ɛwɔ mu mpo rentɔ fam. Yɛhwɛ nea yɛaka yi a, wunhu sɛ Hebri nkyerɛwde ketewaa yi mpo ma yenya awerɛhyem kɛse?
^ nky. 3 Greek nkyerɛwde no, emu ketewa paa ne iota, na ɛne Hebri nkyerɛwde י (yod) sɛ. Wodii kan kyerɛw Mose Mmara no wɔ Hebri kasa mu. Wɔn a wɔhwɛɛ so kyerɛw bi no nso, wɔkyerɛw no Hebri mu. Enti ebetumi aba sɛ nea na Yesu reka ho asɛm no yɛ Hebri nkyerɛwde no.
Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ ɔnam n’Ahenni no so de asomdwoe bɛba asase so. Hwɛ sɛnea ɔbɛyɛ no.
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN No. 4 2017 | Dɛn na Bible Ka Fa Owu ne Nkwa Ho?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN No. 4 2017 | Dɛn na Bible Ka Fa Owu ne Nkwa Ho?
No. 4 2017 | Dɛn na Bible Ka Fa Owu ne Nkwa Ho?
ƆWƐN-ABAN No. 4 2017 | Dɛn na Bible Ka Fa Owu ne Nkwa Ho?
Yesu Kristo—Mesia a Wɔhyɛɛ Ne Ho Bɔ No